Tungstène Heavy Alloys - Luoyang sandoka tungstène-molybdène Material Co., Ltd.
Hakitroky avo, tsara formability sy machinability, miavaka harafesiny fanoherana, avo modulus ny fihenjanan'ny resaoro, manaitra mafana conductivity sy ambany fanitarana mafana. Tsy manolotra: ny tungstène metaly mavesatra alloys.
Ny "matanjaka" no ampiasaina, ohatra, ao amin'ny mahakasika ny fiaramanidina sy ny aerospace orinasa, ny teknolojia ara-pitsaboana, ny fiara sy ny indostria, na ho an'ny foundry solika sy ny entona ary atsofony. Isika ankehitriny fohifohy ny telo amin'ireo eto ambany:
Ny vy mavesatra tungstène alloys W-Ni-Fe sy W-Ni-Cu manana hakitroky avo indrindra (17.0 ny 18.8 g / cm3) ary manome fiarovana azo antoka manohitra X-ray sy ny Gamma taratra. Samy W-Ni-Fe sy ny tsy ara-andriamby W-Ni-Cu dia ampiasaina amin'ny fiarovana ohatra amin'ny fampiharana ara-pitsaboana, fa koa ao amin'ny solika sy ny entona orinasa. Toy ny collimators in taratra fitaovana fitsaboana izy ireo antoka marina hatsiaka. Ao amin'ny vato mahay mampifandanja isika mampiasa ny avo indrindra hakitroky ny tungstène metaly mavesatra firaka. W-Ni-Fe sy W-Ni-Cu bebe kokoa dia kely ihany amin'ny avo mari-pana, ary nisinda hafanana tsara indrindra. Toy ny bobongolo Manisika ny aluminium foundry asa, dia afaka ho tezitra foana sy tony tsy lasa malemy.
Ao amin'ny marary mitsika elektrika Machining (EDM) dingana, metaly dia machined ho amin'ny tafahoatra haavon'ny fametrahana mazava tsara amin'ny alalan'ny herinaratra malotony eo amin'ny workpiece sy ny electrode. Rehefa varahina sy ny manjarano electrodes tsy ho amin'ny asa, akanjo-mahatohitra tungstène-copper- electrodes dia afaka milina metaly na dia mafy tsy misy olana. Ao amin'ny ranon-dra price nozzles ho an'ny orinasa ny coating, ny ara-nofo sy ny fananan 'tungstène varahina indray hameno tsara hafa iray.
Niditra an-tsokosoko metaly mavesatra tungstène metaly roa ahitana singa ara-nofo. Nandritra ny roa-dingana dingana orinasa mpamokatra entana, ny porous sintered fototra no vokatra voalohany avy amin'ny singa sy ny teboka ambony mpandrendrika, ohatra ny refractory metaly, eo anoloan'ny masonkoditra misokatra ireo dia tafiditra amin'ny liquified singa amin'ny mpandrendrika ambany teboka. Ireo fananan 'ny olona niova kasinga foana. Rehefa nizaha ambanin'ny mikraoskaopy, ny fananan 'ny singa tsirairay mba ho hita foana. Any amin'ny ambaratonga macroscopic, na izany aza, ny fananan 'ny tsirairay no mitambatra kasinga. Amin'ny maha-safiotra fitaovana metaly, ny fitaovana vaovao mety, ohatra, manana conductivity mafana vaovao sy ny mafana fanitarana soatoavina.
Rano dingana-sintered tungstène-metaly mavesatra no vokarina avy amin'ny fifangaroan'ny vy powders in-tokana sehatra famokarana dingana nandritra izay singa amin'ny mpandrendrika ambany hevitra dia ketraka teo ambony ireo amin'ny mpandrendrika hevitra. Nandritra ny dingana boky voaravitra, ireo singa alloys mitambatra amin 'izay manana mpandrendrika teboka ambony kokoa. Na dia be dia be ny tungstène, izay manana mpandrendrika avo fotoana, dia levona mandritra ny dingana boky voaravitra. Plansee ny ranon-javatra dingana sintered ankapobeny fitaovana soa avy amin'ny tungstène singa ny hakitroky, modulus ny fihenjanan'ny resaoro sy ny fahaizana mandray X-ray sy ny Gamma taratra tsy mijaly amin'ny misy ny lafiny ratsy mifandray amin'ny fanodinana ny madio tungstène Mifanohitra amin'izany kosa, ny coefficient ny mafana fanitarana sy ny mafana sy ny herinaratra conductivity ny rano-sintered dingana miankina singa iray lehibe dia lehibe ny fanaovana hatraiza eo amin'ny boky voaravitra nandray anjara tamin'ny dingana.
Back-bato fitaovana ara-nofo miaraka mitambatra ny fananana ny singa ara-nofo roa samy hafa. Nandritra izany dingana, ny fitaovana tenany aza voatana am-boalohany ao amin'ny fanjakana, ary mifatotra amin'ny manify ihany Junction. Ny metaly dia fused ao anaty lasitra mba hamorona ny fehin-vitsivitsy monja micrometers ny habeny. Tsy toy ny welding sy soldering teknika, fomba io dia miovaova, ary indrindra miantoka optimum mafana conduction.